भरतपुर अपडेट : रेनुलाई दुई हजार मतको अग्रता, कसकाे मत कति ?
May 18, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुर अपडेट : रेनुलाई दुई हजार मतको अग्रता, कसकाे मत कति ?
चितवन । भतरपुर महानगरपालिकामा नेकपा माओवादी केन्द्रकी मेयर उम्मेदवार रेनु दाहाल दुई हजार मतले अगाडि छिन्। ३० हजार २५२ मत गणना गर्दा उनले ११ हजार ९० मत पाएकी हुन्। उनका प्रतिस्पर्धी नेकपा एमालेका विजय सुवेदीले ९०९० मत पाएका छन्। प्रचण्डकी छाेरी रेनु पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबाट मेयर पदमामा उठेकी हुन्। यस्तै भुँइकटहर चुनाव चिन्हबाट बागी उम्मेदवारी […]
May 18, 2022 N88LeaveaComment on मतपत्रमा कसले लेख्याे, ‘चोर नेताहरुलाई नो भोट’
मकवानपुर । हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मतपत्रमा मतदाताले चोर नेताहरुलाई नो भोट भनेर आक्रोश पोखेको भेटिएको छ । हेटौंडा उपमहानगरको वडा नम्बर ४ भुटनदेवी माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रको जारी मतगणनामा नो भोट भनेर लेखिएको पाइएको हो । मतदाताले मेरो भोट, चोर नेताहरुलाई नो भोट भनेर लेखेका छन् । मंगलबार पनि सोही वडामा नो भोट लेखिएको मतपत्र भेटिएको […]
भरतपुरमा मतान्तर फराकिलाे बनाउँदै रेनु, २८ हजार ६४३ मतगणना हुँदा कसकाे कति ?
May 18, 2022 N88LeaveaComment on भरतपुरमा मतान्तर फराकिलाे बनाउँदै रेनु, २८ हजार ६४३ मतगणना हुँदा कसकाे कति ?
चितवन । स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा मतगणना जारी छ । याे समाचार तयारपार्दासम्म जम्मा २८ हजार ६४३ मतगणना गरिएको छ । पछिल्लो मतगणनाअनुसार प्रमुख पदमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)की उमेदवार रेनु दाहाल निरन्तर अगाडि छिन् । उनले १० हजार ४४९ मत पाएकी छन् । नेकपा (एमाले)का उमेदवार विजयी सुवेदीले आठ हजार […]
गगन थापाकाे इलाकामा देखाइदिए बालेनले खेल, ल्याए सिर्जनाकाे भन्दा दाेब्बर मत (अपडेट)
May 18, 2022 May 18, 2022 N88LeaveaComment on गगन थापाकाे इलाकामा देखाइदिए बालेनले खेल, ल्याए सिर्जनाकाे भन्दा दाेब्बर मत (अपडेट)
काठमाडौं । काठमाडौं वडा नम्बर ३० को वडाध्यक्षमा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारले अग्रता कायम गरिरहेका छन् । मेयरमा भने यहाँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनलाई नै धेरै भोट परेको छ । प्राप्त विवरणअनुसार यस वडामा अहिलेसम्म बालेनलाई ७३७ मत आएको छ भने कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले ३७८ ल्याएर दोस्रो स्थानमा छिन् । तेस्रो स्थानमा रहेका एमालेका केशव स्थापितले […]
स्थापितको ‘काेर एरिया’मा मतगणना सुरु ! देखिन थाल्याे अलिअलि छनक
May 18, 2022 N88LeaveaComment on स्थापितको ‘काेर एरिया’मा मतगणना सुरु ! देखिन थाल्याे अलिअलि छनक
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको वडा नम्बर २८ को मतगणना सुरु भएको छ । यो एमालेका मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितले भोट खसाएको वडा हो । प्रारम्भिक मतगणनामा अहिलेसम्म स्थापितले अग्रता लिएका छन् । ८७ मतसहित उनी अग्रस्थानमा रहँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनले ७३ मत ल्याएर पछ्याइरहेका छन् । यस्तै कांग्रेसकी सिर्जना सिंहको ४७ मत छ । समग्रमा […]
४४ हजार १४० मत गन्दा बालेनलाई १६ हजार ८९० मत, मतान्तर कति ?
May 18, 2022 N88LeaveaComment on ४४ हजार १४० मत गन्दा बालेनलाई १६ हजार ८९० मत, मतान्तर कति ?
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा मेयरका स्वतन्त्र उमेदवार बालेन शाहको अग्रता कायमै छ । ४४ हजार १४० मतगणना हुँदा उनले फराकिलो अग्रता कायम गरेका छन् । स्वतन्त्र उमेदवार बालेन शाहले १६ हजार ८९० मत प्राप्त गरेका छन् । एमाले उमेदवार केशव स्थापितले ९ हजार २१ मत प्राप्त गरेका छन् । कांग्रेस उमेदवार सिर्जना सिंहले ८ हजार १२६ […]
२१ वर्षीय बशिष्ट कुमार बने गाउँपालिका अध्यक्ष, कान्छा अध्यक्ष भन्दै सर्वत्र चर्चा
May 18, 2022 N88LeaveaComment on २१ वर्षीय बशिष्ट कुमार बने गाउँपालिका अध्यक्ष, कान्छा अध्यक्ष भन्दै सर्वत्र चर्चा
वीरगञ्ज । पर्साको कालिकामाई गाउँपालिकामा २१ वर्षीय एक युवक गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । राष्ट्रिय जनता पार्टी (जसपा) बाट निर्वाचन लडेका बशिष्ट कुमार आफ्ना निकटतम् प्रतिद्वन्दी नेपाली कांग्रेसका ४२ वर्षीय अजयकुमारलाई १०८ मत अन्तरले पराजित गरेका हुन् । बशिष्ट कुमारले ३ हजार ७१९ मत ल्याए भने अजयकुमारले ३ हजार ६०५ मत ल्याए । उपाध्यक्षमा भने […]
काठमाडाैंकाे ताजा अपडेट : बालेन र स्थापितबीचकाे मतान्तर कति ? (भर्खरैकाे विवरण)
May 18, 2022 N88LeaveaComment on काठमाडाैंकाे ताजा अपडेट : बालेन र स्थापितबीचकाे मतान्तर कति ? (भर्खरैकाे विवरण)
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन)ले नेकपा एमालेका उम्मेदवार केशव स्थापितभन्दा ८ हजार भन्दा बढी मत अन्तरले अग्रता लिएका छन् । ४३ हजार ६४८ मतगणना गर्दा बालेन्द्रले १७ हजार ३१ मत पाएका छन् । नेकपा एमालेका उम्मेदवार स्थापितले ८ हजार ८७६ मत पाएका छन् । उनीहरुबीचको मत अन्तर ८ हजार १ सय […]
चितवनको कालिका नगरपालिकाको मेयरमा एमालेकाे शानदार जित, गठबन्धन पत्तासाफ
May 18, 2022 N88LeaveaComment on चितवनको कालिका नगरपालिकाको मेयरमा एमालेकाे शानदार जित, गठबन्धन पत्तासाफ
चितवन । चितवनको कालिका नगरपालिकाको मेयरमा पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारलाई पराजित गर्दै नेकपा एमालेका विनोद रेग्मी निर्वाचित भएका छन् । उनले गठबन्धनका उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका शिवराम केसीलाई १४३ मतले पराजित गरेका हुन् । रेग्मीले १० हजार ७१४ मत ल्याउँदा पराजित बनेका कांग्रेसका केसीले १० हजार ५७१ मत पाए । रेग्मी र केसीका बीचमा निकै […]
हेर्नुस काठमाडौंका कुन वडाबाट कति मत प्राप्त गरे बालेन, स्थापित र सिर्जनाले?
May 18, 2022 N88LeaveaComment on हेर्नुस काठमाडौंका कुन वडाबाट कति मत प्राप्त गरे बालेन, स्थापित र सिर्जनाले?
काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन शाहले अग्रता बढाएका छन्। सार्वजनिक भएको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार शाहले १६ हजार ७ सय ७५ मत पाएका छन्। उनलाई नेकपा एमालेका केशव स्थापितले ८ हजार ७ सय २६ मतसहित पछ्याइरहेका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहले ७८३३ मत सहित तेस्रो स्थानमा छन्। हालसम्म काठमाडौंका वडा नम्बर १, २, […]